ဒါကို သုံးညလိမ်းအိပ်ပါ။ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် ..
May 5, 2019 Thuta Star 0
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သုံးည လိမ်းရုံနဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Vitamin E ကို အဓိကသုံးပြီး အသားအရေထိန်းသိမ်းတာပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းစရာမလိုဘဲ သဘာဝအလှကို အားလုံးလိုချင်ကြမှာပါ။ မင်းသမီးလေးရဲ့ အသားအရေမျိုး လိုချင်နေသူ ကောင်မလေးတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ […]
လူတော်တော်များများက ကိုယ့်မိဘတွေကို အောက်က စကားဆယ်ခွန်းထဲက တစ်ခွန်း ဒါမှမဟုတ် တစ်ခွန်းထက် ပိုပြောခဲ့ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သားသမီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့က မိဘတွေကို ဒီစကားတွေကို ထပ်မပြောတော့ဘဲ နားလည်ပေးကြရအောင်။ လူ့ဘဝက တိုတောင်းလွန်းပါတယ်။ ကိုယ့်နံဘေးက ဆွေမျိုးသားချင်း၊ ချစ်သူခင်သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားမှ သူတို့က သင့်ဘဝမှာ […]
စိတ်ကျန်းမာရေးကြောင့် သံကြိုးချည်ထားတဲ့ မိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြံတဲ့လူ
စိတ်ကျန်းမာရေးကြောင့် အိမ်မှာသံကြိုးချည်ထားသူမိန်းကလေးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြံတဲ့ဘေးအိမ်မှ လူကို ရပ်ကွက်မှ ၀ိုင်းဖမ်း စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်း၍ နေအိမ်တွင်းမှာသံကြိုးချည်ထားသူအမျိုးသမီးကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန်ကြံစည်သောဘေးအိမ်မှ အမျိုးသား ကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့် . .ရွှေပြည်သာ မေလ ၅ ရက် ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ဘုံရှည်ကုန်းရပ်ကွက်တွင် ခြံချင်းကပ်လျှက် နေထိုင်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် အသက်၂၀အရွယ် အမျိုးသမီးအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် […]
သင့်ဘဲက သင့်ကို လုံးဝ ပြောပြမှာမဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅) ခု
သင့်ဘဲက သင့်ကို လုံးဝ ပြောပြမှာမဟုတ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅) ခု ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးတွေ ဆီက ဘယ်လို အရာတွေ မျှော်လင့်လဲ? ယောက်ျားလေးတွေ ဘာကြိုက်တတ်လဲ? ယောက်ျားလေးတွေ စိတ်ဝင်စားအောင် ဘာလုပ်သင့်လဲ? စသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ […]
အရပ်ပုပုကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းရဲ့ အားသာချက်တွေ..
အရပ်ပုပုကောင်မလေးတွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းရဲ့ အားသာချက်တွေ ကိုယ်ချစ်မိတဲ့ ကောင်မလေးက အရပ်ပုပုနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြတဲ့ အားသာချက်လေးတွေ ရရှိမှာအမှန်ပဲနော်။ အချစ်မှာ မျက်စိမရှိသလို ကိုယ်ချစ်မိတဲ့သူဟာ အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာဟာလည်း သူက သင့်ကို ချစ်မိစေလို့ပဲမဟုတ်လား။ ချစ်စရာကောင်းတယ် သူလုပ်သမျှအရာအားလုံးက ချစ်စရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့က သူတို့ကို […]
ဆက်ပက် သင်္ကြန် သီချင်းနဲ့ ဆယ်လီဖြစ်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ကျော်ကျော်နန္ဒ ဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းအမိုက်စားတွေကြောင့် နာမည်ကြီးလာသူပါ။ သူက ခုဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေကိုပါ လက်ခံလုပ်ကိုင်နေပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ် ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ live […]
အပြုအမူဆိုတာ နှလုံးသားက လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် အရင်ကနဲ့မတူပဲ ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေ ရှိလာပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲ မပေးနိုင်ပေမယ့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိသွားရင် သူ့ကိုယ်သူ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် တကယ်ချစ်မိသွားရင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ချစ်ခင်ကြင်နာပြတယ် […]
မီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူ သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲပြောပြီ ၁.၅.၂၀၁၉နေ့က ကသာညဈေးတန်းပေါက်ဝမီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူအကြောင်း သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲ ဂွင်ဖန်တာလား အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေပေးလာတော့ အတိအကျလေးဖြစ်အောင် စုံစမ်းပီး ရေးသားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ သူ့နာမည်က…ဦးစိုးညွန့် အသက်က ၅၂နှစ် သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် သမီးကအသက်၁၁နှစ်သားလေးက၇နှစ်ပါ သူတို့မိသားစုဟာမဘိမ်းမြို့နယ် ရွှေကျောင်းကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြပါတယ် သူ့အမျိုးသမီးက သူ့သားအငယ်လေး၁နှစ်သားမှာ ဆုံးသွားပြီး သားသမီးတွေကိုလယ်ယာလုပ် ကြုံရာအလုပ်တွေလုပ်ပီးပြုစုပျိုးထောင် ပေးခဲ့တယ်… […]
​မော်​ဒိုက်​မှာ ချစ်​သူနဲ့ ကြည်​နူးခဲ့တဲ့ အမှတ်​တရ​တွေကို ထုတ်​ပြလိုက်​တဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​
ရင်​ခုန်​ချင်​စရာ​ကောင်းတဲ့ ခန္တာကိုယ်​​ကောက်​​ကြောင်းအလှကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ မင်းသမီး​ချော​လေး သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က​တော့ သူမကိုယ်​သူမ အမြဲ ယုံကြည်​မှုရှိပြီး ဆွဲ​ဆောင်​မှုရှိတဲ့ ပုံရိပ်​​တွေကို ​ဝေမျှ​ပေး​လေ့ ရှိသူတစ်​ဦးပါ။ အမြဲလိုလို ပရိသတ်​​တွေကို အံအားသင့်​​အောင်​ ပြုလုပ်​တတ်​တဲ့ သင်​ဇာက​တော့ တ​လောကလည်း ​မော်​ဒိုက်​သို့ ချစ်​သူနဲ့အတူ ခရီးထွက်​ခဲ့တဲ့အ​ကြောင်း လူမှုကွန်​ယက်​မှာ ထုတ်​ပြလိုက်​တာ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေ အံအားသင့်​ခဲ့ရတာပါ။ […]
မအေးသောင်းလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ အပျိုကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ကို ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာမှ ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးပြီး အနုပညာလောကထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးက သူမရဲ့ စွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ အဲ့စွဲဆောင်မှုလေးတွေကြောင့် ကိုကိုတွေ မောင်မောင်တွေကြားမှာရေပန်းစားလှသူလေးတစ်ဦးပါ။.မအေးသောင်းကတော့ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ယောက်ျားမယူသေးပဲ အပျိုကြီးလုပ်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေပါသေးတယ်။သူမကိုယ်တိုင်က […]